Ụlọ Hyperbaric - Hyperbaric Oxygen Supplies - SeaLong
Home/Ụlọ Hyperbaric - Hyperbaric Oxygen Supplies - SeaLong
Ụlọ Hyperbaric - Hyperbaric Oxygen Supplies - SeaLongteknamfg2018-01-22T08:40:22+00:00
Ụlọ Hyperbaric Ngwa
Hyperbaric Oxygen Chamber Ngwa
Onye Nlekọta Ugbo Ọgwụ
Njikwa na-ekpo ume
Uzo zuru oke nke FoodLong Supplies
Ụlọ Hyperbaric Kwadoro Egwu
Ụlọ Hyperbaric kwadoro akwụkwọ / Ibulite
Tekna na-enye usoro zuru ezu nke SeaLong Ngwaahịa.
Achọrọ Mkpa Hyperbaric?
A na - agbasawanye ngalaba nnyemaaka hyperbaric iji tinye igbe valvụ mpaghara, oghere elu ma ọ bụ obere ogwe aka, mkpuchi cryogenic na valvụ valite, ndị na - ekpo ọkụ na - ekpo ọkụ, akpịrị ikuku oxygen, na ihe ntanetụ, 100% ụda, enweghị akpa, hyperbaric scrubs
Hyperbaric Hood na olu olu
Uwe nke na-adịghị egbuke egbuke & Nnukwu Ọpụpụ n'ọdụ ụgbọ mmiri Setetịpụrụ ihe ndị a na-emepụta nke ọma na-agụnye necksal non-latex nke nwere nkwesi olu ike. Ngwunye na-abụghị ndị na-egbu oge ga-agbatịa ma laghachi na ọdịdị ọbụna mgbe o jiri ọtụtụ ojiji. Neckseal nwere nnukwu oghere; ebe a na-eji egwu egwu; ebili mmiri iji kwụsịrị drainage n'ime tubing; na ọdụ ụgbọ mmiri. Nnukwu Ọdịdị Ntụpụ Ụgbọ Mmiri 12³ / 8 "(314mm) x 11½" (291mm). Neckseal bụ otu-ọrịa, ọtụtụ-eji na Hood bụ otutu-eji ndidi.
100% Akwụsịtụ ọnyà Hyperbaric, na njirimara niile akọwapụtara site n'aka anyị iji mee ka onye ahụ nwee ahụ iru ala na nke dị jụụ.
100% ụbụrụ nwere ihe kwesịrị ekwesị
Nwee olu olu maka nkasi obi.
5.5 oz nke ulo oru mmeputa ulo oru.
Ọ dịghị akpa - na-egbochi ndị ọrịa na-ebute ihe n'ime ụlọ.
Ọ dịghị agbanwe, ya na ụcha drawton.
Kwadoro ụkpụrụ ụkpụrụ ISO 9001.
Atụmatụ omenala dị na arịrịọ.
Onu isii nke usoro Microsoft nke ị na-ewuru anyị na 2009 ka na-enwe ntụkwasị obi na -eri dị irè iji rụọ ọrụ.
Ebe ọ bụ na iwu mbụ anyị nke atọ Monoplace Ụlọ dị na 2000 anyị zụrụ ihe karịrị $ 1 Nde dollar nke HBOT Usoro si Tekna.